Iza moa ianao tamin'ny fiainanao taloha? (Miaraka amin'ny valiny marina mahitsy!) - Fialamboly Fotsiny
Iza moa ianao tamin'ny fiainanao taloha? (Miaraka amin'ny valiny marina mahitsy!)
Ok, noho izany dia somary mahafinaritra fotsiny ity fa tsy zavatra horaisina am-po, fa amin'ny alàlan'ny fizahana ilay quiz fohy etsy ambany, dia azonao atao ny manamboatra izay mety ho andraikitrao mety ho teo ambanin'ny taona.
Ny lohahevitry ny fiainana taloha dia mahaliana ary misy kaonty marobe momba ny olona toa mahatadidy zava-nitranga tamin'ny tantara izay tsy ho fantatr'izy ireo raha tsy izany, ka angamba misy zavatra ao amin'ny hevitra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray.
Na izany na tsy izany, ity no quiz ho anao hilalao:
ny fomba ilazana amin'ny olona tianao azy nefa tsy manimba ny fisakaizanao
Mametraha hevitra etsy ambany mba hanoro ahy ny marina araka ny hevitrao ny valiny ary koa ny eritreritrao amin'ny fiainana taloha raha manana ianao. Te-hihaino anao aho, na inona na inona fomba fijerinao.
Ary raha tianao ny manao quiz toy ilay etsy ambony, kitiho ireto rohy manaraka ireto haka bebe kokoa:
Iza amin'ireo 7 no maty?
Firenena iza eto amin'izao tontolo izao no mifanentana amin'ny toetranao?
Iza ny anaranao zanatany amerikana?
Hira hira vaovao bray wyatt
rehefa tsy mifanaraka ianao